व्रेन ट्युमर पीडित जगदिश पौडेललाई आर्थिक अभावमा उपचारमा समस्या ! – ebaglung.com
२०७६ जेष्ठ १४, मंगलवार ०४:३१	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
निर्मल पौडेल, कुस्मा पर्वत २०७६ जेठ १४ । पर्वत जिल्लाको फलेवास नगरपालिका ७ लिमिठानाका व्रेन ट्युमर पीडित जगदिश पौडेल यतिवेला काठमाडौको न्युरो अस्पतालको ३०९ नम्वरको वेडमा जीवन र मृत्यु संग लडिरहेका छन् । खेती किसानी गरेर जीवन गुजारा गर्ने पौडेलको परिवारमा यतीवेला ठुलो वज्रपात परेको छ । अस्पतालको ३०९ नम्वर वेडमा छट्पटाईरहेका छन् तर अव उपचार गर्न आर्थिक अभाव भएको छ । हात थाप्ने ठाउँपनि अन्त कतै छैन। सानो सात वर्षको छोरा दुई छोरीहरु र श्रीमती विन्दु पौडेल मुर्छित भएर पौडेलको नजिकै वसिरहेका छन् । उपचारमा अहिले सम्म गाउँलेहरुले जम्मा गरेको र आफन्त हरुले जोडजाड पारेको ३ लाख खर्च भैसकेको छ ।अझै करिव ५ लाख जति लाग्ने अस्पताल स्रोतले वताएको छ । पौडेल परिपवारमा अव माग्ने र हात थाप्ने ठाउँ अन्त कतै पनि छैन।
विरामीको छेवैमा रहेकी श्रीमती विन्दुले भक्कानिएर रुँदै भनिन् “जिन्दगीमा यस्तो पनि हुने रहेछ, हामीलाई मात्र किन यस्तो हुन्छ? कृपया मेरो श्रीमान् लाई सहयोग गरेर वचाइदिनुहोस्, यहाँ लाई केही भैहाल्यौ भने म के गरुँला? यी साना छोराछोरी हरु गरुला वोली पुरा पनि गर्न सकिनन् ।” शल्यकृया पश्चात पौडेल अर्धचेत अवस्थामा पल्टिरहेका छन् । घरीघरी होसमा आउँदा उनी भन्छन् “म वाँच्न चाहन्छु कोही मलाई वँचाई दिनुहोस् । ” यत्ति मात्र वोल्छन् । डाक्टरले धेरै वोल्न पनि नहुने वताएको छ ।१२ दिन अगाडी एक्कासी ढलेपछी वुटवलको अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदा व्रेन ट्युमर भएको थाह भएपछी थप उपचारको लागि काठमाण्डौ रिफर गरिएको हो । अहिले अन्नपुर्ण न्युरो अस्पतालको ३०७ नम्वर वेडमा रहेका छन् । लिमिठानामा जीवन गुजारा नचलेपछी साना नानीहरु र श्रीमती लिएर रोजगारको लागि भैरहवा गएर दिनभर काम गर्ने र साँझ विहान चुल्हो वालेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए ।
अहिले आँफु जीवन मृत्युको दोशादमा रहेर जीन्दगीको भिख मागीरहेका छन् । सानै उमेरमा वुवा गुमाएका र वाँकी जिन्दगीका हरेक मोडहरुमा अत्यन्तै कष्ठकर दिनहरु विताईरहेका पौडेल लाई एक्कासी यति ठुलो वज्रपात परेको हो । जिन्दगीभर पौडेलले कहिल्यै सुखमा अनुभुती गर्न पाएनन् । पौडेलले वुवा गुमाएपछी उनका दाईले हुर्काई वढाई गरेर यतिसम्म पु-याएका थिए ।
विरामी भएको थाहा पाएर रन्थनिएर भाईको उपचारका लागि दाई रमाकान्त पौडेलले छिमेकमा जोरजाम पारेर लगेको पैसो सकिएपछी पौडेलको अवस्था अहिले विजोग भएको छ । दाई रमाकान्त पौडेलले पनि गहभरी आँसु पार्दै भने “कस्लाई के भनौ खै भगवान पनि कति निष्ठुरी निर्दयी हुँदो रहेछ जो होचो उस्का मुखमा घोचो, हामी गरिव लाई नै यतीठुलो घात ग¥यो ।” अव खर्च गर्ने पैसा छैन खोजेर ल्याएको सवै सकियो ,कसैले सहयोग गरिदिए भाईलाई वँचाएर घर फर्किने आसामा पौडेल । वाँकी डाक्टरको हातमा । मानवीयता दर्शाएर सहयोग गर्न इच्छुकले पीडितका दाजु रमाकान्त पौडेलको मोवाईल नम्वर ९८४७६४५६९४ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । जिन्दगीमा आपत सवैलाई पर्छ यहाँको सानो सहयोगले पौडेलले नयाँ जीवन पाउने छन् ।
नेकपा ताराखोला १ का पदाधिकारीहरुले सपथ ग्रहण गरे !